India: Fankalazàna ny Taombaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2017 7:17 GMT
Fanamarihana: ity lahatsoratra ity dia navoaka tamin'ny volana Martsa 2007
Taombaovao ny volana martsa hoy ianao manontany tena ? Eny, eny, amin'ireo faritra sasantsasany ao India io no voalohan'ny taona vaovao satria manaraka tetiandro hafa tsy toy ny tetiandro gregoriana izay arahin'ireo firenena tandrefana ry zareo.
Anisan'ireo fiantsoana ny taombaovao ao India ny Ugadi, Gudi Padwa. Tsy ankalazaina ao India manontolo akory ilay fety, fa ankalazaina any amin'ireo faritra atsimo sy ireo faritra avaratr'i India. Amin'ny ankapobeny, ireo akanjo vaovao, ireo puja (vavaka) ary mazava ho azy fa ny sakafo no anambaràna ny taona vaovao, izay tena singa fototr'ilay fetibe ao India.
Mitaky fampiasàna voninkazo avokoa ny fankalazana ny fety rehetra ao India. Nampiasaina mba handravahana ireo sarin'Andriamanitra ireo voninkazo, ho an'ireo vavaka, ary mba handravahana ny tsihin'ireo ankizivavy sy ireo ramatoa. Manoratra i Rajesh Dangi avy any Bangalore fa mitombo isa ireo mpivarotra voninkazo mandritra ny vanim-potoanan'ireo fetibe. Ary misy sary iray miaraka amin'ny lahatsorany. Mariho ireo karazana voninkazo sy ireo girlandy izay ahitana ny jasmin, ireo raozy, ary ireo voninkazo hafa manitra izay mamony mandritra io vanim-potoana io.
Deepa Mohan mampiseho sarina hazo indiana nentin-drazana, tsara tarehy miaraka amin'ny felany: gul mohar (sary aseho tena an'ohatra, notontosaina tamin'ireo voa, ny tsimoka ary ireo voninkazo). Manoratra i Deepa hoe, “… tandindon'ireo ezaka miroborobo nataonay tamin'ny lasa ka tonga vokatra tsara ankehitriny ireo voninkazo ireo, ary ny karaokany eo ambany dia mampiseho ny voan'ireo asa, nafafy amin'izao fotoana izao, izay hanjary voninkazo vaovao amin'ny hoavy”.
Maneho ny fanahin'ny taombaovao ao amin'ny faritra atsimon'i Andhra Pradesh ny lahatsoratr'i KesavaIndia. Manoratra momba ny dikan'ny karazan-tsakafo iray antsoina hoe “Ugadi Pachadi” izy :
Tsy maintsy atao isan-tokantrano ny fikarakarana manokana ny sakafo iray antsoina hoe Ugadi Pachadi (chutney). Voamadilo vaovao miaraka amina rano madio, ireo caryotes mafana, ireo manga vaovao ary ireo voninkazo “neem” vaovao no manome ireo fangarona Ugadi Pachadi. Nafangaro tao anaty vilany tanimanga iray vao avy nohaingoana ary avy eo apetraka manoloana ny Andriamanitra lehibe mitantana ny trano izy ireo. Aorian'ny puja, mandray anjara amin'ny Ugadi Pachadi avokoa ny rehetra ary avy eo miaraka misakafo. Misy dikany manokana io Pachadi io: ny fangaron'ireo voninkazona neem mangidy sy ny caryote mamy dia mampiseho fa ny fiainana ihany koa dia fifangaroan'ny fanaintainana sy ny hafaliana…
Nanoratra lahatsoratra iray miavaka mikasika ny fomba fankalazan'ireo Konkanis ny taombaovan'izy ireo antsoina hoe Gudi Padwa i Vee de Past, Present and Me. Manontany tena izy hoe maninona no miezaka mamerina izay niainany taombaovao fony fahazaza tany Etazonia izy ka manoratra hoe,
Dia mbola izay ihany, lalovako ireo dingana sady mikarakara ilay sakafo tranainy fanaonay isaky ny Sansar Padwa/Gudi Padwa/Ugadi. Sady tonga saina no tsy tonga saina, manohy ireo dingana aho izay hitako nataon'ny reniko sy bapama isantaona isantanona… rehefa manentoento eran'ny trano lasa naresaka tampoka teo ireo hanitra mahazatra, hitako ilay hazavana malefaka eny amin'ny mason'ny vadiko. Hita taratra anati'ny masoko koa io hazavana malefaka io. Izay no ilay taratry ny fiadanana, ny fahatsapana fa ao an-trano any an-tanin'olona, ilay fahazazàna nanjavona sy ilay maha-olon-dehibe izay milatsaka eo ambonin-tsika. Tampoka teo, fantatro.